အသဲကွဲဖူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » အသဲကွဲဖူးလား
Posted by thureinmaung on Oct 31, 2012 in Relationships & Family, Society & Lifestyle | 25 comments
thurein maung has written7post in this Website..
View all posts by thureinmaung →
ပက်ပက်စက်စက်ကြီးကို ကွဲဘူးတာပေါ့ကွယ် :-) ပြောရရင်လဲ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အကုန်ပေါ်တော့မှာ မို့လို့မပြောတော့ပါဘူး။
စိတ်လဲသိပ်ညစ်မနေပါနဲ့။ ဒါတွေကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။
လာသွားကြရအောင်ဗျာ အရက်ဆိုင်ကို … အသဲကို အရက်နဲ့စိမ်လိုက်ရင် ပြန်ဆက်သွားတယ်တဲ့ …
အချိန်က ကုစားပါလိမ့်မယ် အကျိုးရှိမဲ့စာ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမဲ့စာ
တွေဖတ်ပေါ့ တခြားပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ရင်း စိတ်ကိုနှစ်ထား
ငိုချင်ရင်ငိုသာပစ်လိုက် (တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ပေါ့) ပြောချင်တာတွေပြောပြီး ငိုပစ်လိုက်။
ယေက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ငိုချင်တဲ့အခါရှိတာပဲ ငိုသာငို :harr: (မငိုချင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့)
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်လည်ပါ။ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းကိုရင်ဖွင့်ပါ။
ညအိပ်ကာနီးရင်ဘုရားရှိခိုးပါ ပုံတော်ကိုဖူမြှော်ရင်း ဘုရားရှင်ရဲ့အေးချမ်းခြင်းကို စိတ်မှာမှန်းပြီးကူးယူပါ။
စိတ်နည်းနည်းငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တော့ အလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်ပေတော့..။ ဒါပေမယ့် လေးဖြူရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ဆိုလား အဲဒီလိုလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။
ပြီးရင်ငိုချလိုက် ကျွန်တော်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရှေ့မှာငိုမိသွားတာ
အချိန်ကကုစားတယ်ဆိုတာလည်းကြာဦးမှာပါ ကျွန်တော်ဆို ၁၂လပိုင်းဆိုရင်ပြတ်တာ၁နှစ်ပြည့်
တော့မယ် ခုချိန်ထိသတိရတုန်းပဲ တိုကဆိုင်မှုရှိရင်ပိုဆိုးတယ်။
အကောင်းဆုံး အမြန်ဆုံးကတော့ နောက်တစ်ယောက်ကို မြန်မြန်ရှာလိုက်ခင်ည
အရက်နဲ့ကွဲနေတာကိုပြန်ဆက်ဘို့ကျတော့အမေဆူမှာစိုးတာရယ် ကျွန်တော့်မျက်နှာ ခိုးစားရင်
အချိန်က ကုစားသွားလိမ့်မယ်… သူက သမားတော်ဘဲကွယ့်… တရုတ်လူမျိုး အချိန်ကို ပြောထှာ ဟုတ်ဝူးနော်….. တိုင်မ်း ကို ပြောထှာ…. ဟိ… နောက်တာပါကွယ်…..
သူ့ထက်သာမဲ့သူနဲ့ တွေ့လာမှာပေါ့… ကိုယ့်အချစ်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ဘဲ တွေးထင်လိုက်ပါ…
အချစ်မှာ အရူံးဆိုတာ မရှိပါဘူး….. နေသာသလို နေပစ်လိုက်ပါ…….
ကဲ အားပေးသွားဒယ်နော်………… :hee:
ဆေးပညာမှာတော့အသည်းဆဲလ်က stable cell လို့ သင်ရတယ်
အရေပြားဆဲလ်တို့ လိုနေ့ တိုင်းအသစ်မဖြစ်ပေမဲ့ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ဆဲလ်နေရာမှာ အသစ်ပြန်မွေးပေးတယ်
အသည်းတခြမ်းလောက် သူများပေးလိုက်လဲ ကျန်တဲ့တခြမ်းကနေအခှိန်တခုအတွင်းမှာ အရင်လိုပြန်ပြည့်သွားနိုင်တယ် ။
( ဟီး…..ကျွှန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကို တရုတ်တကောင်ဖြတ်ခုတ်သွားကတဲက တရုတ်ဆိုအသေမုန်းတာ ။ အမျိုးတော်တဲ့ တရုတ်တွေတောင် ခပ်တန်းတန်းပဲ )
(၁) အသည်းကွဲသီချင်းဖွင့်ပြီး အားရပါးရကို အော်ငိုပစ်လိုက်…ဟိုသီချင်းထဲကလိုပေါ့.. “ငါဝအောင်ငိုလိုက်မယ်..ဒီနေ့တစ်ရက်တည်းငိုမယ်..” ဆိုပြီးလေ…
(၂) အစားများများစားပါ… ဖြစ်နိုင်ရင် တရစပ်နီးပါးကိုစားပါ..အစားနဲ့ ပါးစပ် မပြတ်ပါစေနဲ့…
(၃) လှတပတလေးနေပါ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပြီး ပြင်ဆင်ပါ…
(၁) ကို လုပ်ပြီး (၂)၊ (၃)၊ (၄) တွေမှာ အာရုံစိုက်လိုက်ရင် အသည်းကွဲနေဖို့ အချိန်မရှိဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..အစားစားခြင်းဖြင့် ပိုဝလာပြီး အလှပြင်ခြင်းဖြင့် ပိုကြည့်ကောင်းလာနိုင်ပါသည်။ အသည်းကွဲသော်လည်း ခံစားမနေရပဲ ပိုစိတ်ချမ်းသာနေသည်ဟုတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။
အသေအချာ ကိုကွဲခဲ့ဖူးတာပေါ့….( ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကထားခဲ့ပြီး ကွဲတာနော် )….
အချစ် သစ်တွေ့ တော့မှ အရင်လူကို တကယ်မချစ်ပါလား ဆိုတာ သိသွားတာ….
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ ထက်ပိုပြီး အဆပေါင်းများစွာချစ်မိလို့ ဘဲ….အချစ်စစ်ကိုတကယ်တွေ့ မိသွားလို့ ဘဲ….
အားမငယ်ပါနဲ့ …. : )
အသဲလား ကွဲဖူးသလိုလိုပါ ( ကိုယ့်ဘာသာ မကွဲအောင် ပြန်ဆက်ခဲ့ဒယ်)
နောက်တာပါဂျာ … . သူ့ဘာသာနေတဲ့အသဲက .. ကွဲစရာလားဗျာ
အသဲလား မကွဲဖူးဘူးဗျ ( အသဲကြီးသာကွဲသွားရင် သေတော့မပေါ့ )
အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှု့ကို ထိန်းထားနေလို့ပါ။
ထိန်းမထားဘဲ အခြားအာရုံတစ်ခုခု ပြောင်းပြီးနေကြည့်လိုက်ပါ၊
အေးဆေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ဥပမာ- သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြောဆိုနေလိုက်တာတို့၊
စာဖတ်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်းပြုနေတာတို့၊ အားကစားတစ်ခုခု လောလောဆယ် တစ်စိုက်မက်မက် လုပ်နေတာတို့ပေါ့။ အသဲကွဲတာတဲ့စိတ်ကို ခံစားပြီးရေရှည်စေတာ လူပျော့တွေလုပ်တာမို့ တစ်ယောက် မရ နောက်တစ်ယောက်ပြောင်း ချစ်လိုက်ပါလေ။
အသဲကွဲပီဆိုတာနဲ့ လူရှင်းတဲ့နေရာမှာ အားရပါးရ ငိုချလိုက်။
ကိုယ်အရမ်းခင်တဲ့သူကို ဖွင့်ပြောပစ်လိုက်။(သူဟာ နှုတ်အေးတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။)
ဇာတ်ကားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အချစ်ကားတွေကို ရှောင်ပါ။
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ပါ။(သူနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်။)
ကိုယ့်ကိုကိုယ် smart ဖြစ်နေအောင် နေပါ။(ဖြစ်သလိုကြီး မနေပါနဲ့)
လူအများကို ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံရမယ်။
game ဖြစ်ဖြစ် internet ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်နေပေါ့။
အသဲကွဲတာ မကြုံဖူးတဲ့လူဆိုရင် လူမပီသသေးဘူးဘဲ ပြောရင်လွန်မလားရှင့်
ကိုယ်ကခွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခွဲခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်လျက်နဲ့ အသဲကွဲရတာဆိုရင်
နောက်တော့ အသဲကွဲခံစားရတာ အပြီးမေ့ဖျောက်လိုက်ပြီး ကိုယ့်အတွက်၊ဘ၀အတွက်
အကျိုးရှိတာတွေမှာ အစားထိုးအသုံးချလိုက်ရင် အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ တစ်ချိန်မှာ ရယ်စရာဖြစ်သွားမှာပါ…အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ မစားနိုင်မသောက်နိုင်၊မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင် နဲ့
‘ရောဂါတစ်ခုလို’ ရည်ရှည်လများ ခံစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ အချစ်ကျေးကျွန်
ကိုသူရိန်မောင်ရေ…….အသည်းကွဲတာနည်းနည်း၊ အဲ့ဒါရမယ်ရှာရှာပြီးတော့ အရက်နဲ့စိမ်ချင်နေတဲ့ ဟိုအပေါ်ဆုံးက မန့်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဂျီးရဲ့ အကြံပြုချက်တော့ လက်မခံလိုက်နဲ့နော်…။ ကောင်းကင်ပြာ ပြောကြည့်မယ်…။
၁) Phone ထဲမှာ အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေ ထည့်ထားရင် မနှမြောဘဲ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ခပ်မြူးမြူး သီချင်းတွေ နားထောင်ပါ..။ (Eg. Party Rock Anthem)
၂) အရောင်လွင်လွင် အ၀တ်အစားတွေ ရွေးဝတ်ပါ။
၃) သူ့အတွက် ပေးရမယ့်အချိန်တွေ ကိုယ်ပိုရတယ်လို့ သဘောထားပါ။ (စာအုပ်ဖတ်၊ အခွေကြည့်ပါ။) (ချွင်းချက်။ အချစ်ဝတ္ထုများကို မဆိုလိုပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်တစားရှိလာမည့်၊ စိတ်နှစ်နိုင်မည့် သူရဲတစ္ဆေ ၀တ္ထုများကို ဆိုလိုပါသည်။ ညဘက်အိမ်သာသွားရင် အဖော်ခေါ်ရန် အိမ်သားတစ်ယောက်အား အကူအညီကြိုတောင်းထားပါ။)
၄) နံနက်အိပ်ရာထတိုင်း မှန်ကြည့်ပြီး ငါဟာ အတော်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဟု ၁၅ ကြိမ်ရွတ်ပါ။
၅) သူနဲ့ လွဲသွားတာဟာ ကံဖယ်တာပဲဟု သဘောထားပါ။
၆) သူ့ကို မေ့မယ်လို့ တွေးတာဟာ သူ့ကို ခဏခဏသတိရစေတတ်ပါတယ်..။
၇) သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်များများပေးပါ…။
၈) အားငယ်တဲ့စိတ်မ၀င်အောင် သတိထားပါ…။ ဒါဟာ ဆုံးရှုံးမှု သေးသေးလေးတစ်ခုအဖြစ် မြင်ပါ။
၉) ရီမောပျော်ရွှင်စရာများကိုသာ စဉ်းစားပါ။ ဟာသ စာအုပ်၊အခွေများ အလေးပေးကြည့်ပါ။
၁၀) အားကစားလုပ်တဲ့ဘက်ကို စိတ်ညွှတ်ပါ။ ဒါဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်လဲ ကောင်းပြီး ပင်ပန်းတာကြောင့် စောစောအိပ်ဖြစ်ပါတယ်။။
ပလာစတာကြီးကြီးနဲ့ ကပ်ထားလိုက်ပေါ့ ကွဲတဲ့နေရာကိုလေ ဟီးးးး
အတွေးထဲရောက်လာတိုင်း ဆစ်ဆစ်နဲ့နာကျင်နေတုန်းမို့ ဘယ်နည်းနဲ့
၀ါသနာပါတဲ့ ဂိမ်းကိုတော့ သဲသဲမဲမဲ ကစားနေလိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့.. အကိုတို့အမတို့ အချိန်ပေးပြီးမန့်ပေးထားတဲ့ဟာတွေ
အဲ အဲ မောင်ရင်ဓေါ်ရွှေကြည်အသဲမကွဲဘူးပါဘူးနော်.. :harr:
မှန်တာပေါ့ချက်ခြင်းတော့ဘယ်အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလဲနော် ကြာတော့လည်း နေသားကျသွားမှာကွယ်..။
အသဲကွဲခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့သားကြီး ပြန်လာပြီ
သုံးနှစ်လောက် အမေ့ဆီ မပြန်ဘဲ လေလွင့်တဲ့ သားလူမိုက်ရယ် (ထူးအိမ်သင်၏ သီချင်း)
မသိဘူးးးးးးးးးးးးး မကြားချင်ဘူးးးးးးးးးးးး
မကြုံဖူးဘူး လို့လည်းမဟုတ် အစွမ်းအလန်း သိပ်မရှိလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး
မွေးရင် သေမည် …. သေဖို့ မွေးကြသည် …. သေချင်းသဘောတရားကို သတ္တ၀ါဟူသမျှ တွေ့ရမည် … တွေ့ရမည် …. တွေ့ရမည် ………… (တိုက်ပွဲခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်)
အခုတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်ထပ်အသစ်တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီပို့စ်လေးကို လာပြန်ကြည့်ပေးပါအုံးနော် ….
ရန်ကုန်မှာဆို ရေဝေး၊ ထိန်ပင် တစ်ခုခု။ နယ်မှာဆိုရင် နီးစပ်ရာ သုသာန်ကိုသွား။ တွေ့၇ပါလိမ့်မယ် ..ငိုလိုက်ကြ၊ ၀မ်းနည်းလိုက်ကြ၊ ပူဆွေးလိုက်ကြတာ၊ ကြေကွဲလိုက်ကြ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့လို့ အထီးကျန်တဲ့ သူတွေရဲ့ မျက်ရည်နဲ့ ၀မ်းနည်း တသ ယူကြုံးမရတဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ ပူလောင်မှုတွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် ကိုယ့် အသဲကွဲတာလေးလောက်က ????
သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အပူ၊ ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုက ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်သွားပြီး သူတို့တွေအတွက်ပါ အငှား ပူဆွေး ၀မ်းနည်းချင်စိတ် ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး (ပိုပြီး) ပူဆွေးသောကရောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေပါသေးလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ …….။
(ငါမသေး သေးဘူးလေ…မသေသေးရင် အကုန်လုပ်လို့ရတယ်)
ဟင်း ဟင်း ဟင်း……
တွေ့ရာနေရာမှာ ပျော်အောင်နေလိုက်၊ ခင်တဲ့မင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရင်လဲ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့
ပြောလိုက်၊ ကိုယ့်အတွေးထဲကို ကြေကွဲစရာတွေဝင်လာရင်အာရုံကို ပြောင်းပစ်လိုက်၊
ဥပမာ- ရော့ခ် သီချင်းအပြင်းစားလေးကို လူကြားကောင်းအောင် ညည်းပစ်လိုက်၊
တစ်ယောက်နေတဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် စာအုပ်ဖတ်ချင်ဖတ်၊ စာရေးချင်ရေးပေါ့။
ကိုပြုမူနေသမျှအားလုံးဟာ အေးဆေးပါလို့ တဖက်လူကထင်ရင်
စတာနော် ခင်ဗျား အပြင်းပြေအောင်လို့
စက္ကန့်မလပ် ရယ်နိုင် မောနိုင်ပါစေ……
အခုဝမ်းနည်းပူဆွေးနေရတာတွေက နောက်တော့ ရယ်ပွဲ့ဖွဲ့စရာဖြစ်သွားမယ်
အသည်းကွဲတာလား မကွဲတာလားတောင်မသိဘူး … စားရအခက် .. သွားရအခက် ..လေးလံပြီး စိတ်အားငယ်တယ် … ဘာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာ အသည်းကွဲတာပဲလား
အသည်းကွဲတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ခံစားချက်တွေစာနဲ့ ချရေးလိုက်။
စကားလုံး ကောင်းကောင်းလေးတွေ အဲ့ အချိန်ထွက်တတ်တယ်။